Gamtaan Awrooppatti Koomishinara Ol'aanaa Dhimmoota Haajaa Alaa, Joosef Borel
Gamtaan Awrooppaa rakkoo namoomaa suukaneessaa naannoo Tigraay keessaa fi dhiibbaa inni naannoo sana irratti qabu hedduu yaaddessaa ta’uu beeksise. Walitti bu’iinsi gamasii mudatee baatilee sadii keessatti, daandiin xiqqoon jiraatus gargaarsa namoomaa Tigraayiif erguuf malli quunnamtii murtaa’aa ta’uun, kanneen gargaarsa akkaan barbaadaniin ga’uuf , balaa beelaa fi lubbuun namaa daran darbuu ittisuuf danqaa ta’e jira.
Tigraay waaltaa fi gama dhiyaa dhaqqabuun rakkisaa yoo ta’u mooraalee lammiiwwan Eertraa keessa jiran lama immoo qaruma dhaqqabuun hin danda’amne. Daandiin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaman akkasumas uummata Tigraay keessaa, naannoo daangaalee Affaarii fi Amaaraa irra jiran akka qajeelfama namoomaa fi loogiin alaa, walabaatti dhaqqabuun mirkaneeffamuu qaba.
Gamtaan Awrooppaa itti dabaluu dhaan Itiyoopiyaa keessaa siivilotaaf baqattootaaf eegumsa gochuun yaaddessaa ta’aa dhufeeraa, gabaasaaleen ajjeechaa, dhiittaa mirga namaa hamaa fi dhiittaan seera baqattoota adunyaa fi kan gargaarsa namoomaa cabun dhaga’amaa jira. akkasumas baqattoota eetraa dirqisiisanii biyyatti deebisuu akka dhaabatu mirkaneeffamuu qaba jedhee jira. Gamtaan Awrooppaa Yunaayitid Isteetis waliin ta’uu dhaan kanneen lola Tigraay keessaa hammeessan, dararaa gara jabinaa raawwatanii fi walitti bu’iinsa gosaa tuqataa jiran loltoonni Eertraa Itiyoopiyaa keessaa akka ba’an gaafataniiru.
Gamtaan Awrooppaa hojii komiishina mirga namaa Itiyoopiyaaf qabu ka deggeru ta’uu ibee dhiittaa mirga namaa fi seera sadarkaa addunyaa kanneen cabsuun shakkaman irratti qorannaa geggeessu akka itti fufu jajjabeessa.
Mootummaan Itiyoopiyaa yaadawwan murtii kana akka deggeru akkasumas dhiittawwan mirga namaaf yakkawwan dalagamaniif itti gaafatamni guutuun akka jiraatu kan ibsame qorannaa walabaa fi adeemsa murtii haqaa guutummaan hojii irra oolcha jennee abdanna jedha ibsichi. Sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa naannoo Tigraay akka seenan akkasumas gaazixeessonni biyya keessaa eegumsi akka godhamuuf ibsi gamtaa Awrooppaa fi Yunaayitid Isteetisiin ba’e kun beeksisee jira.